Tafaariiqda Maalinta Jacaylka iyo Saadaashaha Iibsiga eCommerce ee 2021 | Martech Zone
Haddii ganacsigaaga tafaariiqda ama ganacsigaaga ganacsi uu ku dhibtoonayay aafada iyo xirxirida, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka shaqeyso waqti dheeraad ah Ololayaasha Maalinta Jacaylka maaddaama ay u muuqato in tani ay noqonayso sanad rikoodh ah kharash gareynta - inkasta oo ay jiraan caqabado dhaqaale! Waxaa laga yaabaa in waqti badan la qaato guriga kuwa aan jecel nahay ay hurineyso ololka jacaylka… ama waxay nooga baahan tahay inaan wax ka bedelno (kaftanka).
Sahaminta Aasaasiga ah ee Tafaariiqda Qaranka ayaa saadaalinaysa in macaamiisha ay qorsheynayaan inay ku qarashgareeyaan celcelis ahaan $ 196.31, ilaa 21% sanadkii horeRikoorkiisii ​​hore ee ahaa $ 161.96. Kharash bixinta ayaa la filayaa inay wadar ahaan tahay $ 27.4 bilyan, oo ka sarreysa 32% rikoorkii sanadkii hore $ 20.7 bilyan.
Maalinta Jacaylka Istaatiistikada Istaatistikada
Sida laga soo xigtay Aasaasida Qaranka, Maalinta Jacaylka ma ahan maalin uun in la muujiyo qaddarinta jacaylka xaaskaaga. Macaamiisha ayaa hadiyado u iibinaya kuwa kale ee muhiimka ah, caruurtooda, macalimiintooda, dadka la shaqeeya xitaa xayawaankooda! 15% dadka Mareykanka ah xitaa waxay iibsadaan hadiyad Maalinta Jacaylka.
Kharashka Macaamiisha - macaamiisha ayaa sheegay in celcelis ahaan $ 30.19 ay ku bixin doonaan xubnaha qoyska aan ahayn isqaba, inyar oo kayar $ 29.87 sanadkii hore; $ 14.69 $ saaxiibbadaa, illaa $ 9.78; $ 14.45 ardayda dhigata fasalka iyo macallimiinta, laga bilaabo $ 8.63; $ 12.96 oo ku saabsan shaqaalaha la shaqeeya, illaa $ 7.78; $ 12.21 xayawaanka guryaha jooga, laga bilaabo $ 6.94, iyo $ 10.60 kuwa kale, laga bilaabo $ 5.72.
Maalinta Jacaylka ee Xayawaanka - 27% macaamiisha ayaa sheegaya inay u iibsan doonaan hadiyadaha Jacaylka ee xayawaankooda, tiradan oo ah tan ugu sareysa taariikhda sahanka waxayna ka ahayd 17 boqolkiiba sanadkii 2010 wadar dhan 1.7 bilyan.
Bixinta Da'da - Da'da 18-24– waxay qorsheynayaan inay ku bixiyaan celcelis ahaan $ 109.31. Da'da 25-34 waxay u muuqdaan inay leeyihiin dakhli badan iyo carruur ay iibsadaan oo filayaan inay ku bixiyaan $ 307.51. Da'da 35-44 waa kuwa ugu badan ee kharash gareeya $ 358.78.
Kharajka Jinsiga - Sida sanad kasta oo ka mid ah sahankan, raggu waxay qorsheynayaan inay ku bixiyaan wax ka badan dumarka $ 291.15 marka loo eego $ 106.22.
Qaybaha Dukaameysiga ee Maalinta Jacaylka ugu Sareeya
Taariikhda Habeenka - $ 4.3 bilyan waxaa lagu bixin doonaa habeen gaar ah oo ay soo xaadiraan 34% kaqeybgalayaasha Maalinta Jacaylka.
Candy - $ 2.4 bilyan waxaa isticmaali doona 52% macaamiisha qorsheynaya inay kaqeybqaataan hadiyadaha Maalinta Jacaylka - iyadoo 22% qorsheynayaan inay shukulaato siiyaan.
Jewelry - $ 5.8 bilyan waxaa ku bixin doona 21% dadka dabaaldegaya ee qorsheynaya inay kaqeyb qaataan.
ubax - $ 2.3 bilyan waxaa ku bixin doona 37% oo qorsheynaya ka qeyb qaadashada.
Gift Cards - $ 2 bilyan ayaa lagu bixin doonaa kaararka hadiyadaha sanadkan.
Kaararka salaanta - $ 1.3 bilyan ayaa lagu bixin doonaa kaararka salaanta ee Maalinta Jacaylka.
Qeybaha ugu hooseeya waxaa ka mid ah aaladaha, xubinimada jimicsiga, qalabka isboortiga, qalabka jikada, xayawaannada la buuxiyo… iyo iskudhafyada (dadku wali ma sidaas ayey sameeyaan?
Ololayaasha Maalinta Jacaylka
Maskaxda ku hay in lacagtu ay wali ciriiri u tahay macaamiil badan sanadkaan kaqeybgalayaasha badan ee Maalinta Jacaylka lasiin doono waxaa laqaban doonaa daqiiqada ugu dambeysa… marka bilaw ololahaaga oo kusii wado ilaa maalinta aad gaarsiin karto!
Waxaan la wadaagnay maqaal kale iyo faahfaahin dheeri ah qaar fikradaha Tartanka Warbaahinta Bulshada maalinta Jacaylka!
Tags: nacnacshukulaatadadhaqanka macaamiishaecommercekaararka hadiyaddakaararka salaantaastaamahadahabkajeclahayjacaylku hawada ayuu ku jiraamaqaayadahadukaanoMaalinta Jacaylkamaalinta valentine's infographicKharashka macaamiisha Maalinta JacaylkaHadiyadaha Maalinta JacaylkaKharashaadka tafaariiqda ee Maalinta JacaylkaDukaameysiga Maalinta Jacaylka
SimpleTexting: Qalab SMS iyo Farriin Qoraal